Waa Maxay Muujin Tayo Sare oo Dibadda ah?
Dhammaan bandhigyada LED-ka ee bannaanka loo soo saaro lama wada siman. Iyada oo xulashooyin iyo astaamo aad u tiro badan la heli karo, xulashada midka ugu habboon ayaa dhib noqon kara. Qaar ka mid ah Display LED waxay soo saartaa heerar tayo sare leh halka kuwa kale ay diirada saaraan bixinta bandhigga LED-ka banaanka ee ugu fiican
Midkee ayaad dooneysaa inaad aado?
Soo Bandhigida Qiimaha ugu Hooseeya?
Soosaarayaasha iyagu suuq galiya qiime ahaan kaliya waa shirkadaha iska ilaaliya. Noocyada shirkadahaani way yimaadaan oo dhaqso ayey u baxaan. Soo-saareyaasha leh alaabada ugu raqiisan ayaa sida caadiga ah jaraya geesooyin badan markay tahay nooca qaybta gudaha ee ay u adeegsadaan muujinta LED-ka. Tani waxay keenaysaa alaab qiimo jaban oo tayo hoose leh. Si loo daboolo shirkadaha tayada hooseeya waxay adeegsadaan ereyo suuq geyn ah si ay u sharxaan una iibiyaan wax soo saarkooda.
Caadi ahaan soo saaraha muuqaalka LED-ka oo leh qiimaha ugu jaban ayaa bixiya:
Heerarka hoose ee dhalaalka - kaliya 4,000 NITS
Way adagtahay in la isticmaalo softiweerka fariinta - taageero la'aan & culeys la'aan
Waqtiyada hogaaminta dheer ee qaybaha & taageerada
Shahaadooyin Tayo La'aan - UL ma liis gaarin, cUL liis garayn ama CE liis garey
Warranty Bad - ugu yaraan 2 qaybood oo damaanad ah
Wadaagista Pixel ama Xallinta Virtual - softiweerka sheeganaya inuu xoojinayo sawirrada muujinta muujinta laakiin muddada dheer wuxuu abuuri doonaa dhibaatooyin badan oo ku saabsan muuqaalka muuqaalka iyo nolosha qaybaha modullada.
Waa maxay bandhig tayo sare leh oo LED ah?
Adoo daacad u ah oo aad ka hor mariso wax soo saarkaaga meheraddaadu had iyo jeer way kori doontaa macaamiishiisuna way ku kalsoonaan doonaan tayadaada.
Markaad raadineyso muuqaal tayo sare leh oo soo saare ah iyo soo saaraha had iyo jeer hubi inaad eegto haddii bandhigyada ay hogaaminayaan yihiin:
Heerkulka & Cimilada la Tijaabiyay - cutubyo lagu qiimeeyay laga jaray -22 digrii ilaa 62 heerkul darajo waxay ka dhigan tahay soo-saaraha inuu si dhab ah u isticmaalayo qaybaha gudaha ee gudaha. Tani waxay u dhigantaa sanado waxqabad la isku halleyn karo oo ah xitaa jawiga ugu daran.
Waxay Gudubtaa Imtixaanno Adag - kahor inta uusan soo bandhigin LED-ka markabka waa in lagu tijaabiyaa oo uu ka gudbaa imtixaanka soo socda: Daacadnimo Calaamado, Bilowga Qabow, Qiiqa Shucaaca, Heerkulka, Saamaynta, Ololka, Roobka, Xasaanadda, iyo Imtixaannada Badbaadinta.
Qalabka Taageerada & Tababarka Bilaashka ah - maktabada fiidiyowyada tababarka software-ka ee horay loo sii daayay iyo tababarka barnaamijyada tooska ah ee bilaashka ah.
Waxsoosaarka Waxsoosaarka –Shirkadaha waxsoosaarka oo ah ISO 9001: 2008 Shahaado waa calaamad weyn oo shirkad adag leh. Shahaadada noocan ahi waxay u dhigantaa tayada.
Dammaanad - ugu yaraan 2 sano oo dammaanad ah. Shirkad kasta oo damaanad qaad ku sameysa kaligood oo aan isticmaalin shirkadda caymiska dhinac saddexaad waxay ka dhigan tahay soo saaruhu inuu aaminsan yahay tayada alaabada ay soo saaraan.